Dry Lip - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
တစ်ဆိတ်ရှိ ဒီအပျိုကြီးတွေပဲ ထိခိုက်ခံနေရတာပါပဲ။တကယ်တော့ အပျိုကြီးဖြစ်လို့ နှုတ်ခမ်းခြောက်တာမဟုတ်သလို နှုတ်ခမ်းခြောက်လို့ အပျိုကြီးဖြစ်တာလဲ မဟုတ်ရပါဘူး။
ဒါဆို ဘယ်သူတွေမှာ နှုတ်ခမ်းခြောက်လဲ?
ကျား/မ၊ အပျို/အအို၊ ကလေး/လူကြီးမရွေး လူတိုင်းနှုတ်ခမ်း ခြောက်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုအရာတွေက နှုတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းကို ပိုဖြစ်စေသလဲ?
၆)ကောင်းမွန်သော အဆီများ လုံလောက်စွာမစားခြင်း။
၁)နှုတ်ခမ်းကို လျှာဖြင့်ခနခနလျက်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။တံတွေးဟာ အငွေ့ပျံမှုမြန်ဆန်ပြီး နှုတ်ခမ်းသားကိုပိုခြောက်စေနိုင်ပါတယ်။
၂)Flavoured lip balmများကိုရှောင်ပါ။အနံ့အရသာများပါဝင်သော lip balm များဟာ နှုတ်ခမ်းသားကို ပိုမိုခြောက်သွေ့စေပါတယ်။
၃)နေလောင်ဒဏ်ကိုရှောင်ပါ။နေပူထဲထွက်လျှင် Sunscreen(သို့)lip balm လိမ်းထွက်ပါ။
၄)အေးခဲသောရာသီဥတုများတွင် အပြင်ထွက်လျှင် နှုတ်ခမ်းကိုလည်စည်း(သို့)ပဝါဖြင့် ဖုံးပြီးမှထွက်ပါ။
၁)Moisturizer လိမ်းပါ။ သဘာဝအသီးအနှံမှထုတ်တဲ့ အဆီ၊ပျားဖယောင်း စသည်တို့ကိုလိမ်းပေးခြင်းဖြင့် နှုတ်ခမ်းသားကို စွတ်စိုတင်းရင်းစေပြီး နှုတ်ခမ်းကွဲခြောက်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။
၂)Unflavored lip balm(အနံ့အရသာမပါဝင်သော နှုတ်ခမ်းလိမ်းဆေး)များလိမ်းခြင်းဖြင့်လဲ နှုတ်ခမ်းကွဲခြင်းကိုသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
၃)Humidier သုံးခြင်း။ ခြောက်သွေ့အေးမြသောရာသီဥတု(ဥပမာ-ဆောင်းရာသီ)တွင် အိမ်ခန်းထဲ၌ Humidifier ထားရှိခြင်းက သင့်အရေပြားကိုရောနှုတ်ခမ်းကိုပါ အစိုဓါတ်ပေးထားပြီး နှုတ်ခမ်းကွဲခြောက်ခြင်းကို သက်သာစေမှာပါ။
၄)ဆရာဝန်နှင့်ပြသခြင်း။ အကယ်၍အထက်ပါနည်းများဖြင့်မသက်သာပဲ နှုတ်ခမ်းအကွဲလွန်သွေးထွက်ခါ ရောင်ရမ်းပါက နီးစပ်ရာဆရာဝန်နှင့်ပြသပြီး ကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။
စိုစိုပြေပြေ တင်းတင်းရင်းရင်း နှုတ်ခမ်းသားအလှလေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။